बगैंचामा स्व-निर्मित घोंसले बक्सहरू | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
बगैंचामा स्व-निर्मित नेस्टिङ बक्सहरू
घरको भित्री घोंसले बक्स: यो कसरी काम गर्दछ!
आत्म-निर्मित नेस्टिङ बक्सलाई कहाँ राख्नु पर्छ?
अधिक र अधिक प्राय: तपाईं तिनीहरूलाई तिनीहरूलाई बगैंचा वा जंगलहरूमा हेर्नुहुन्छ: नेस्टिङ बक्से हाम्रो परिवारका पक्षीहरूका लागि। धेरै अनावश्यक रूपमा वा शौकको रूपमा समेत खारेज गरिएको छ, तर जाडो जीवनमा केही पक्षीहरू बचाउँछ।
स्व-निर्मित नेस्टिङ बक्सहरू सर्दी जाडो दिनको लागि शरणको रूपमा
स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्से न केवल ह्याप्ड्स होईन, तर जाडोबाट आश्रयको रुपमा पनि जाडोमा सेवा गर्दछ। प्रकृति संरक्षण युनियन जर्मनीले पनि चराहरूको लागि प्रजनन कोटहरूको कमी देख्छ, किनकि हाम्रो जंगलहरूमा पुरानो र सडेका रूखहरू हराएका छन्, प्राकृतिक प्राकृतिक गुफाहरू पनि कम हुन्छन्।
नेस्टिङ बक्स आफैलाई निर्माण गर्नुहोस्
यसैले, यो पक्षमा कृत्रिम प्रजनन आधारहरूसँग पक्षीहरू उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण छ स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्से प्रस्ताव।
छोराछोरीको साथ घाम बस्तुहरू बनाउनुहोस्
निस्सन्देह तपाईं पनि एक मात्र गर्न सक्नुहुनेछ नेस्टिङ बक्स किन्न। तर यसले बढी अर्थ र सुन्दर बनाउँछ छोराछोरीलाई आफैंसँग निर्माण गर्न नर्सिङ बक्स, पहिलो, यस्ता संयुक्त कार्यहरू केवल बहुमूल्य समय सँगै बिताईन्छ; दोस्रो, बच्चाहरू पक्षी र उनीहरूको प्राथमिकताहरूको व्यवहारको बारेमा धेरै जान्दछन्।
त्यो हो नेस्टिङ बक्स एक पटक व्यस्त भ्रमण र आनन्द उठाउँदा, बच्चाहरू संग उपलब्धिको एकदम राम्रो भावना छ स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स। जाडोमा, केही भाग्यको साथ उनीहरूले टाइमिइस, कुखुराहरू र धेरै अन्य पक्षीहरू हेर्न सक्छन् - र यहाँ सम्म कि गिलिर - हेर्दै नेस्टिङ बक्स एक ठाउँको रूपमा सुत्न प्रयोग गर्नुहोस्।
विशेषतया चिसो सर्दहरूमा सुरक्षित हुन्छ स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स कतिपय पक्षीहरूको जीवन पनि। किनकि विशेष गरी सर्दहरूमा, जब पनि जनावरहरूले सानो खाना खोज्छन्, तिनीहरू धेरै शरीरको चिसो जलाउँछन्। एक चिसो रात मृत्युको मृत्यु हो।
der स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स उत्तम छ स्वाद, फ्याक वा बियर काठ, जुन दुई इन्च मोटो हुनुपर्छ। काठको संरक्षकहरूको सट्टा (फंगल संक्रमण, आदि) को लागी तपाईले लेसिड तेल वा पर्यावरणको अनुकूल पाना प्रयोग गर्नुपर्दछ, अन्यथा तपाइँ जनावरहरूलाई खतरामा पार्नुहुन्छ।
साथै प्रकृति संरक्षण फेडरेशन को नाखून को सट्टा शिकंजाहरुको उपयोग गर्न को लागी सिफारिश गरिएको छ, किनकि बक्स पछि पछि साफ गर्न सकिन्छ। धेरै महत्वपूर्ण हो वेंटिलेशन छेद को तल मा स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स.
बक्समा बर्डको प्रकारमा निर्भर गर्दछ, एक प्रविष्टि छेद को आकार निर्धारण गर्नु पर्छ। उदाहरणका लागि, तीस मिलिमिटरमा, न्युचचेट्स, ठूलो टाइम्स र फ्लोरिडा मार्फत पर्ची गर्न सकिन्छ, जबकि बीस-पाँच मिलिमिटरमा मात्र टाइमिसेका विभिन्न प्रजातिहरूले यसलाई गर्न सक्छन्।
साथै बाह्य आकारको पक्षी पक्षीहरूको बारेमा निर्णय गर्दछ स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स सम्बन्धित। यो तपाईंको बच्चाहरु लाई पहिले भन्दा राम्रो छ कि कुन कुरामा उनीहरूको क्षेत्रमा चराहरू घोंसले बक्सहरूमा निर्भर गर्दछ र त्यसपछि तदनुसार साइज समायोजन गर्नुहोस्। बक्सको आधार निश्चित रूपमा बाह्रभन्दा बाह्र भन्दा बढी सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ। संयोग, एक उपयुक्त र स्पष्ट निर्माण पुस्तिका इन्टरनेटबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
यहाँ ह्याङ अप अपका लागि केही सुझावहरू छन् स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स, प्रविष्टि छेद पूर्वतिर इंगित गर्नुपर्छ र बाकसमा कम्तीमा दुई मिटर लामो हुर्काउनु पर्छ। पेडहरूमा तपाईं सक्नुहुन्छ स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्सहरू तार क्लिप वा स्टेनलेस नाकहरूसँग मिलाउनुहोस्।
यसबाहेक, तपाईंले निश्चित गर्नुपर्दछ कि कुनै वर्षाको समयमा पानी घुमाउन सक्दैन: यसका लागि, बक्सलाई अगाडी बढाउनुको साथै, यदि तपाइँ फेरि इिनफ्ल्लोच राम्रो देख्न सक्नुहुन्न भने पनि। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि बार्सिलोना वा बिरालोहरू द्वारा बक्स गर्न सकिँदैन!
पेडहरू बहाली, शेड, घरका भित्ताहरू र बालबालिकाहरू पछिको उपयुक्त स्थानहरू। प्रजननको मौसम पछि बक्स सफा गरिन्छ। पुरानो घोंसला र यो हटाउनुहोस् स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स बाहिर माझ्छु। दस्तुरहरू लगाउन पक्का हुनुहोस् र तपाईंको घरको साथमा बक्स नलगाउनुहोस्, यहाँ संक्रमणको खतरा छ!
सबैभन्दा राम्रो समय, एक स्वयं निर्मित नेस्टिङ बक्स ढोका पतन हुन्छ। त्यसपछि तपाईं हथौड़ा र sawn गर्न सक्नुहुन्छ!
बालबालिकाका लागि छोटो कथा - बगैंचामा साहसिक कार्य
Composting | बगैचा
बागवानी सुझावहरू - यो बगैंचा कसरी बढ्छ र व्यस्त हुन्छ
बागवानी सुझावहरू - बगैचाको सिंचाई गर्नुहोस्
बगैचा सुझावहरू - अनुकूल गार्डन